ဘရာဇီး ငှက်ရိုး: ABSDF -ကျောင်းသားရဲဘော်-ဗဟိုကော်မတီဝင်ဟောင်း ရဲလင်းရဲ့ မြောက်ပိုင်း ခရီး(၁၀)
ABSDF -ကျောင်းသားရဲဘော်-ဗဟိုကော်မတီဝင်ဟောင်း ရဲလင်းရဲ့ မြောက်ပိုင်း ခရီး(၁၀)
by May Thingyan Hein on Friday, November 2, 2012 at 11:21am ·
နိုဝင်ဘာ ၃၊ ရန်ကုန်မြို့။
မိတ်ဆွေများ အိပ်မက်ဆိုးမှ လွတ်မြောက်ကြပါစေ။
ည ၁နာရီ ၂၇ မိနစ်။
51Unlike · · Share
You, Ko Lin Wai Aung, Nang Aung Htwe Kyi, ကိုဝိုင် ဝိုင်ကေ and 25 others like this.
Thiha Oo ဘေးကကနေ ဖတ်ရတဲ့ သိရတဲ့ လူတစ်ယောက် အနေနဲ့ သိချင်တာ တစ်ခုလောက်တော့ မေးပါရစေဗျာ။
အဲလို ဖမ်းခံရတဲ့လူတွေကို နည်းမျိုးစုံနှိပ်စက်၊ သတ်ဖြတ်နေတဲ့ အချိန်မှာ တစ်ခြားသော အဖမ်းမခံရတဲ့ကျောင်းသားတွေက ဘာလုပ်နေကြတာလည်းဗျာ။
သူတို့ကရော အဲဒီလူတွေရဲ့ လူ့အခွင့်အရေး နဲ့ ရသင့်ရထိုင်တဲ့ ရပိုင်ခွင့်တွေ၊ တစ်ကယ် ထောက်လှမ်းရေး ဟုတ်၊မဟုတ် ဆိုတာတွေ အတွက် ဘာမှ ပြောဆိုခြင်း၊ မေးမြန်းခြင်း မရှိဘူးပေါ့..?
ကြည့်ရတာ ငါ မပါပြီးရော၊ ငါ့မဖမ်းသေးသရွေ့ သူတို့ဖမ်းတာ ငါနဲ့ မဆိုင်ဆိုသလိုများ ဖြစ်နေကြသလားလို့ပါ.....
November 2, 2012 at 7:14pm · Like · 7
Kyaw Soe Win ko Thiha Oo ဒီကာလတွေကို ကိုယ်တိုင်မဖြတ်သန်းခဲ့ရပေမယ့် စဉ်းစားကြည့်မိတာက
လူတွေက အုပ်စုတွေ ကွဲနေလိမ့်မယ်။
လက်ရှိ လုပ်ရပ်တွေကို လက်ခံတဲ့သူ ( မျိုးဝင်းတို့ ဖက်က လူများ)
လက်ရှိ လုပ်ရပ်တွေကို လက်မခံပေမယ့် ကိုယ့်လုံခြုံရေး (အသက်အန္တရာယ်) အတွက် မပြောရဲသူ
ဖြစ်ရပ်တွေကို ဂဃနဏ မသိဘဲ ဝေဝါးပြီး ဝင်ပါမိသူ (မျိုးဝင်းတို့ ဖက်)
ဖြစ်ရပ်တွေကို ဂဃနဏ မသိဘဲ ဝေဝါးပြီး မိမိအလုပ်(တိုက်ပွဲ)ကိုသာ လုပ်နေသူ
ခံနေရသူတွေ ဖက်က ရပ်တည်သော်လည်း ဩဇာမလွှမ်းမိုးနိုင်သူ
စသည်ဖြင့် ကွဲနေကြပြီး လက်နက်ဖြင့် လွှမ်းမိုးမှုကို မတုန့်ပြန်နိုင်ကြ ဟု ထင်မိပါသည်။
November 2, 2012 at 8:50pm · Like · 9
Kyi Zin မတရား အသတ်ခံခဲ့ရသူ စာရင်းကို ဖေါ်ပြခဲ့သလိုပဲ စစ်ကြောရေးမှာ လက်သံပြောင်ခဲ့သူတွေ လက်ရောက် ကျူးလွန်ခဲ့သူတွေ ကိုပါ စာရင်း ပြုစုပြီး ဖတ်ရှုလေ့လာသူ ပြည်သူ အများသိအောင် ဖေါ်ပြပေးစေချင်ပါတယ်။
November 2, 2012 at 10:42pm · Like · 3
Ko Lin Wai Aung ကိုသီဟဦးနဲ့ ကိုကျော်စိုးဝင်း တို့ရဲ့ ကောမက်တွေကို ကြိုက်ပါတယ်....
November 2, 2012 at 10:50pm · Like · 2
Thiha Oo "မတရားမှု တစ်ခုမှာ သင်ဟာကြားနေခဲ့တယ်ဆိုရင်၊ သင်ဟာ မတရားမှုကိုလုပ်တာနဲ့ အတူတူပဲ" ဆိုတဲ့ အဆိုအမိန့်လေး တစ်ခုကို သတိရမိလို့ပါဗျာ...
အစ်မ Nang Aung Htwe Kyi ကတော့ ဘယ်လိုမြင်မလည်း မသိဘူးနော်...။
November 3, 2012 at 2:24am · Like · 2
Aung Naing Thu ပါဂျောင်ကိစ္စတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေ မင်းတို့ကိုငါသေတဲ့အထိမမေ့သလိုငါ့ဆွေစဉ်မျိုး ဆက်လဲမမေ့အောင်ငါမှာခဲ့မယ်၊နိုင်ငံရေးတွေဘာအရေးတွေ လာမပြောနဲ့ ၊မင်းတို့လုပ်ခဲ့တာနိုင်ငံရေးမဟုတ်ဘူး ၊ကိုယ်ရေးပဲလုပ်ခဲ့ကြတာ ၊ဒါကြောင့်ငါ့ရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဖြစ်တဲ့ငါအစ်ကိုကို မတရားလုပ...See More
November 6, 2012 at 11:03am · Like
Posted by ဘရာဇီးငှက်ရိုး at 6:04 PM